बाबुरामको विश्लेषण : प्रचण्ड ढुलमुले, ओली बचनका पक्का | Ratopati
बाबुरामको विश्लेषण : प्रचण्ड ढुलमुले, ओली बचनका पक्का
‘बिप्पा, बीआरआई, एमसीसी सबै लिएर देशको विकास गरौं’
personअरुण बराल exploreकाठमाडौं access_timeफागुन ५, २०७८ chat_bubble_outline0
त्यसैगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिँदै पूर्वमाओवादी नेता डा. भट्टराईले भने, ‘मेरा परम मित्र प्रचण्ड एमसीसीको हकमा पनि ढुलमुल गरिरहनुभएको छ । उहाँको स्वभाव नै त्यस्तो । स्पष्ट धारणा नबनाउने, कता फाइदा हुन्छ, कता धेरै मान्छे छन्, त्यतैको पक्ष लिएर आफू पदमा बसिरहने । उहाँ चौथोचोटि ब्लन्डर गर्दै हुनुहुन्छ । यो चौथो गल्ती नगर्नुहोस् । गर्नुभयो भने उहाँलाई मात्र होइन, देशकै निम्ति ठूलो सङ्कटको विषय बन्न सक्छ । त्यो दोषको भागिदारी उहाँ बन्नुपर्ने हुनसक्छ ।’
नेपालजस्तो देशले बिप्पा, बीआरआई र एमसीसीका साथै सबैखाले विदेशी सहयोग लिनुपर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए । एमसीसीलाई काँग्रेस र जसपा दुवै दलहरू एमसीसीको पक्षमा दृढ रहेकाले काँग्रेस र जसपाको गठबन्धन नटुट्ने उनले बताए ।
एमसीसी सम्झौताको विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–
यहाँले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार्नुपर्छ र हामीले अमेरिकी अनुदान लिनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । एमसीसीविरुद्ध यत्रो आन्दोलन नै भइरहेको छ, तर तपाईंले चाहिँ किन एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्नुभएको ?
म केही कुराको पनि वकालत गर्दिनँ । देश जनताको हितमा समय सापेक्ष ढंगले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको तथ्यमा आधारित भएर म बोल्ने गर्छु । यसरी हेर्दा नेपाली समाज अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि तीब्र आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा जाने मुख्य कार्यभार छ । अरु पनि कार्यभार छन्, राजनीतिक अधिकार, संघीयताको अपनत्व, शासकीय स्वरुपलाई पूरा गर्नुछ । तर, सारमा चाहिँ गरीवी र बेरोजगारीबाट मुक्त नेपाल र समृद्ध नेपाल बनाउने सबै दलहरूको साझा राष्ट्रिय अठोट हो । यसको निम्ति विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा राजनीतिक अर्थशास्त्रको पनि विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि मैले बोल्ने गरेको छु ।
पहिले त आफूले क्रान्ति गर्ने, साधन स्रोतको प्रयोग पनि आफ्नै गर्ने, जनतालाई पूरै एक ढिक्का पारेर परिचालन गर्ने र एक्लै पनि अगाडि बढ्ने भन्ने पनि एउटा युग थियो । अब त्यो युग त गयो । अहिले त हामी संसारसँग बाँधिएका छौं । यस्तो स्थितिमा आफू एक्लैले ढोका बन्दवादी नीतिले मात्रै विकास गर्छु भन्दा संसारका कुनै देश पनि विकास भएका छैनन् । म कुनै पनि देशको अपमान गर्न चाहन्नँ । यस्ता ढोकाबन्दवादी एकाध देशहरू छन्, उनीहरूको के हविगत छ, भोकमरीले कसरी मरिराखेका छन् भन्ने कुरा हामीले देखिराखेका छौं । यस्तो अवस्थामा बाह्य सहयोग, लगानी, पुँजी र प्रविधि नभित्र्याइकन अहिलेको युगमा देश समृद्ध हुन सक्दैन ।
यसै अर्थमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि म अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि सबभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हामीले भारतसँग गर्नुपर्छ, भारतको लगानी प्रविधि ल्याएपछि अरु पनि आँउछन् भनेर मैले बिप्पा सम्झौता अगाडि बढाएँ । मैले गरेरै आएँ । त्यसमा पनि विवाद भयो तर मलाई लाग्छ, त्यो ठीक थियो, अहिले लागू नहुँदाखेरि समस्या भयो ।
हामी सबैका पालामा, सुशील कोइराला त गइसक्नु भो, बाँकी रहेका सबै यसमा (एमसीसीमा) सहभागी छौं । सबैले विज्ञहरूको राय लिएर सबैको सोच विचारै अनुसार यसलाई अगाडि बढाइआएका छौं । आफू छँदा गर्ने अनि बाहिर निस्किएपछि विरोध गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले पनि यो गिजोलियो । यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो ।
चीनमा सि चिनफिङको उदय भएपछि बीआरआई भन्ने अवधारणा अगाडि आयो । त्यसबाट पनि ठुल्ठुला पूर्वाधार बन्ने योजना थिए, त्यो पनि लिनुपर्छ भनेर मैले नै भारत र चीनको गतिशील पुल बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको हो । बीआरआई लिनुपर्छ भनेर मैले त्यसको पनि वकालत गरेको हो । भलै, त्यो पनि विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
पछि अमेरिकाबाट एमसीसी भन्ने यसरी नै अनुदानमा हाम्राजस्ता गरीब देशलाई पूर्वाधार बनाउन दिनुपर्छ भन्ने परियोजना आयो । यो पनि ठीक छ, हामीलाई आवश्यक छ, यो पनि लिऔं भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसकारण यसमा मेरो सुविचारितै भनाइ छ कि अहिलेको युगमा बाह्य सहयोग नलिइकन एक्लै देश बनाउँछु भन्नु एउटा हवाइ कल्पना मात्रै हो ।
हिजोका हाम्रा वामपन्थी साथीहरू, जो धङधङी बोकिराख्नुभएको छ, त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ । यही आधारमा मैले बिप्पा, बीआरआई र एमसीसीका साथै जापान, युरोपियन युनियन सबैको सहयोग लिएर देश विकास गरौं भनेको हुँ । देश विकास भयो, जनता समृद्ध भए, रोजगारी सिर्जना भयो, पचासौं लाख युवा देशभित्रै बसे भने देश बलियो हुन्छ र राष्ट्रियता पनि जोगिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
एमसीसीमा विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् । जस्तै– यो नेपालको कानूनभन्दा माथि हुनेभो, भारत पनि यसमा जोडियो इत्यादि । कतिपय मानिसहरूले त सडकमा अमेरिकी सेना पनि आउँछ भन्ने गरेको सुनिन्छ । सम्झौतालाई अलिकति संशोधन गरेपछि हामी पनि स्वीकार्छौं भनेर प्रचण्डले पनि भनिरहेकै अवस्था छ । तपाईंको विचारमा एमसीसी सम्झौताभित्र यस्ता शंका उब्जाउने बुँदाहरू छैनन् ?
यसमा विवाद आउनुका पछाडि तीनवटा कारण छन् ः एउटा त अज्ञानता । जनतालाई सबै कुरो थाहा हुने कुरा भएन । यसले गर्दा नबुझेर पनि विदेशी सहयोग लिने भन्नेवित्तिकै त्यसले देशै कब्जा गरिहाल्छ भन्ने पुरानो उपनिवेशकालीन युगको धङधङी छ । इस्ट इण्डिया कम्पनीले व्यापार गर्छु भनेर आएर भारतलाई खाएको थियो भनेजस्तो । त्यो त चारसय वर्ष पुरानो कुरा थियो । यसकारणले गर्दाखेरि जनता नबुझेर पनि आतंकित भएका छन् ।
दोस्रो– नेपालमा भारत, चीन, अमेरिकाको त्रिपक्षीय जुन सामरिक द्वन्द्व छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटाले सहयोग गर्यो भने अर्कोले उक्साइदिने गरेको देखिराखेका छौं हामीले । त्यो कारणले गर्दा यसमा भूराजनीति पनि मिसिएको छ ।
तेस्रो कारण– हाम्रा नेताहरूमा नैतिकताको अभाव, इथिक्सको अभाव । आफूले देखेको कुरो स्पष्टसँग नभन्ने । एउटा उखान छ नि, माछा देखे भित्र हात, सर्प देखे बाहिर हात । यस्तो गर्ने प्रवृत्ति छ ।
हामीले पनि यो विषय उठान नगरेको भए हुन्थ्यो, हामीले पनि भन्यौं । तर, अमेरिकनहरूले के भने भने हामीले पनि मानेकै थियौं त । तपाईंहरूले नै माग गरेपछि (संसदमा लाने) हामीले हुन्छ भनेको हो, अब अगाडि बढिसक्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो ।
जहाँसम्म तपाईंले जनतामा आशंका छ भन्नुभयो, यसमा त सम्झौता हेरे भइहाल्यो नि । सम्झौतामा कुनचाहिँ धारामा यसरी नेपालको कानूनभन्दा त्यो माथि हुने र विदेशी सेना आउने कहाँ लेख्या छ ? त्यो भने भइहाल्यो नि त । कतै अहिले नदेखिएको कुरा रहेछ भने ३० दिनको सूचना दिएर खारेज गर्न पाइन्छ । यो कुनै ठूलो कुरो होइन, एक महिनाको सूचना दिएर खारेज गर्न पाइन्छ ।
त्यसकारण यी तीनवटा कारणले गर्दा सिर्जना भएका भ्रममात्र हुन्् । यी भ्रमहरूलाई निवारण गरेर अगाडि जानुपर्छ । मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट ढंगले देश र जनताको हितमा आफूले देखेको कुरो, बुझेको सत्य कुरो भन्नुपर्छ । र, हामीले हिजो जे–जे प्रतिवद्धता गर्यौं, त्यो हामीले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । त्यो नगर्दा देशलाई कति नोक्सान हुन्छ भन्ने जनतालाई बुझाइदिनुपर्छ ।
तर, यो एमसीसी सम्झौता एउटा आर्थिक अनुदान मात्र थियो भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधानचाहिँ पछि केपी ओलीका पालामा किन थपियो ? यो नथपिएको भए ओरिजनल सम्झौता चाहिँ सही थियो भनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनिरहनुभएको छ । यसरी संसदबाट पारित हुनुपर्ने प्रावधान थपिएकाले पनि आशंका बढेको हो कि ?
मेरा परम मित्रबारे म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । त्यतिबेला त उहाँ आफैं सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि । उहाँले किन अगाडि बढाएको ? त्यतिबेलै रोकेको भए भइहाल्थ्यो । यसमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ, उहाँले बुझ्ने कुरा हो ।
जहाँसम्म यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन नगराएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ, त्योचाहिँ सही हो । आवश्यक थिएन । हाम्रो संविधानमा शान्ति सम्झौता, सीमासम्बन्धी सम्झौता, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट जस्ता विषयहरूलाई संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्ने प्रावधान छ । अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्धनका अरु सामान्य प्रकृतिका सम्झौताहरूलाई साधारण बहुमतले नै पारित गर्ने हाम्रो प्रचलन हो । यस्ता आर्थिक सहयोगहरू लिँदा संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रचलनचाहिँ थिएन । अरु देशमा गर्ने प्रचलन पनि हुन्छ । तर, हाम्रोमा पनि कसले जान्ने भएर कानून मन्त्रालयबाट नै यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव आएछ । र, त्यही आधारमा केपी ओलीजी र प्रचण्डजीको संयुक्त सरकारका पालामा उहाँहरूले नै यो प्रावधान राख्नुभयो ।
तर, संसदबाट अनुमोदन गर्दा पनि बिग्रने त केही होइन । आवश्यक थिएन, अनुमोदन नगराएको भए हुन्थ्यो, गराएर बिग्रने त होइन । संसद भनेको सबैको साझा संस्था हो । जनप्रतिनिधिहरूको संस्था हो । त्यसले अनुमोदन गर्यो भने त झन् सबै ढुक्क हुने कुरा भयो नि त । भने यसले बिग्रन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन ।
संसदले अनुमोदन गरे पनि, नगरे, पनि एमसीसी अब जनप्रतिनिधिको कोर्टमा आयो भनेर बुझौं ?
विल्कुल । जनप्रतिनिधि भनेको जनताको कोर्ट हो । म एक्लै बाबुराम भट्टराई बोलेको त छैन । म जनताको प्रतिनिधिकै रुपमा बोलिरहेको छु । यो देशको पुर्व प्रधानमन्त्रीको नाताले देशले मलाई जुन खालको अभिभारा दिएको छ, त्यो निर्वाह गरेको हो मैले ।
अस्ति म गोरखा गएँ । १०– १२ दिनसम्म पूरै उत्तरी गोरखाका गाउँगाउँसम्म पुगेँ । माछिखोला, लाप्राक, वारपाक पुग्दा त्यहाँका जनता एमसीसी पनि पूरै भन्न नसकेर अर्कै के–के भनिरहेका थिए । एमसीसी हो ? भन्दा ‘हो’ भन्नुहुन्थ्यो । त्यस्ता जनतामा पनि भ्रम फैलिएको रहेछ र मैले यस्तो हो भनेँ जनतालाई ।
तपाईं एउटा पार्टीको नेता पनि हो । एमसीसीको विरोधमा हिजोमात्रै सडकमा प्रदर्शन र आन्दोलन भएको पनि देख्नुभयो होला । यस्तो अवस्थामा एमसीसीको पक्ष लिँदा आगामी चुनावमा भोट घट्ने, राष्ट्रवादी जनमत अर्कोतिर जाने डरले नेताहरू नबोलेका पनि हुन सक्छन् । तपाईंले चाहिँ चुनावी नाफा–घाटा हेर्नुभएको छैन ?
नेताले नाफा–घाटा हेर्नुहुँदैन । नेताले देश र जनताको हित हेर्नुपर्छ । सत्य र न्यायको कुरा गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही त्यो अप्रिय सत्य हुन्छ, त्यो पनि बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । नेता भनेको जनताभन्दा अलि छिटो देख्ने, अलि परसम्म देख्ने र जनतालाई दिशानिर्देश गर्दै डोर्याउने हो नेता भनेको । हामीकहाँ चाहिँ भीडको पछि लाग्ने र पपुलिस्ट हुन खोज्नेलाई नेता भन्न थालियो । तर, त्यस्तो नेता होइन । तिनीहरू अवसरवादी र आफ्नो चुनावी स्वार्थका लागि मौकापरस्त चिन्तन राख्ने मान्छेहरू हुन् ।
यो विषयमा विरोध हुनु स्वाभाविक हो । लोकतन्त्रमा विरोध गर्नुपर्छ, हामीले पनि हिजो विभिन्न विषयमा विरोध गरेको हो । अहिले पनि गर्नुपर्छ, भोलि पनि गर्नुपर्छ । जनताले खबरदारी गर्नु लोकतन्त्रमा विल्कुल स्वाभाविक हो र नैसर्गिक अधिकार पनि भएकाले म त्यसलाई स्वागत गर्छु । तर, नेताले त ठीक र बेठीक के हो भन्नुपर्छ ।
त्यसैले, हामीले भन्नुपर्छ र जनताबाट हामीले भोट पनि लिनुपर्छ । तर सचेत भोट लिने हो । जनतालाई सचेत पारेर एउटा मुद्दाका आधारमा भोट लिने हो । ढाँटेर, ठगेर, झुक्याएर भोट लिने होइन । भोट आउँदैन कि भनेर डराउने होइन, जनतालाई बुझाएर अनि भोट लिने हो । जनताको भोट नलिई र जनप्रतिनिधि नभई त जनताको काम गर्न सकिँदैन लोकतन्त्रमा । तर, जनतलाई सुसुचित गरेर, ती सुसुचित जनताको मत लिएर हामी नेता बन्नुपर्छ । राजनीतिज्ञले लिने बाटो त्यही हो ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये काँग्रेसमात्र एमसीसीको पक्षमा छ, अरु सबै दल विपक्षमा छौं भनेर माओवादीको संसदीय दलको बैठकपछि नेताहरूले भनेको सुनियो । एमसीसीका कारण गठबन्धनमा काँग्रेस एक्लिएकै हो ? यसमा जसपाको चाहिँ पोजिसन के हो ?
त्यसो होइन । काँग्रेसको सुरुबाटै एमसीसीमा स्पस्ट मत छ । काँग्रेस उदार लोकतन्त्रको संस्कारमा बसेको छ, त्यसको हामीले सराहना गर्नैपर्छ । हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीमा उपेन्द्र यादव कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म संघीय परिषद अध्यक्ष छु । अमेरिकी डेलिगेशन आउँदा हामीलाई पनि भेट्न आए । उनीहरूलाई हामीले सँगै भेट्यौं ।
फतिमा सुमार भदौमा र डोनाल्ड लु मंसिरमा आए । उनीहरूलाई भेट्दा हामीले सँगै भेटेर एउटै कुरा गरेका छौ । त्यसक्रममा हामीले सकारात्मक छौं, हाम्रो सकारात्मक भुमिका हुन्छ तर राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दलले मिलेर गर्नुपर्ने र हाम्रो मात्रै संख्या नपुग्ने भएकाले सबैसँग समझदारी बनाएर जान्छौं भनेका छौं । त्यस अर्थमा हाम्रो पनि मत यो सम्झौता ठीक छ र यसलाई पारित गरेर जानुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले यसमा कुनै दुविधा र भ्रम छैन ।
यद्यपि बहस र छलफल हुन सक्छ, व्यक्तिका निजी विचार पनि हुन सक्छन् । यसो हुँदा काँग्रेस र जसपा यसबारेमा स्पस्ट रुपमा एमसीसीको पक्षमा छौं । अरु माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू हामीसँग सही हो भन्नुहुन्छ, तर पार्टीभित्रै विरोध भएकाले हामीलाई समय दिनुपर्यो भनेर उहाँहरू दुवैजना (प्रचण्ड र माधव) ले भन्नुभएको हो । साझा बैठकमा पनि त्यही भन्ने गर्नुभएको छ । तर अहिले के हो, त्यो उहाँहरूले नै जान्ने कुरा भयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुरुदेखि नै पुरानो वामपन्थी सोच, विदेशी सहयोग नै लिनुहुँदैन भन्ने छ । उहाँहरूको विरोध छ ।
सहमति भएन भने जस–जसको सहमति हुँदैन,उहाँहरू असहमत भएर बस्ने । गठबन्धनभित्रै हो भने गठबन्धनमा रहन उहाँहरूको नैतिकताले कति दिन्छ, त्यो उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो । हैन भने गठबन्धन भित्र र बाहिरका विचार मिल्नेहरूले मिलेर यसलाई पारित गर्ने अरुले आफ्नो मत राख्ने दोस्रो विकल्प हुन सक्छ ।
मलाई लाग्छ, गठबन्धनले सहमति बनाएरै जानु राम्रो हुन्छ । कथंकदाचित त्यसो भएन भने बडो दुर्भाग्य हुन्छ । मैले अस्ति पनि एउटा टिप्पणी गरें– सामान्य अनुदान सहयोगका रुपमा मात्रै लिएको भए ठूलो कुरा थिएन । यसलाई समर्थन विरोध गर्न पाइन्थ्यो, गठबन्धनमा बस्नु–नबस्नु केही फरक पर्दैनथ्यो । जब यसलाई एउटा भूराजनीतिक परराष्ट्र नीतिको प्रश्न बनाइयो, कुनै देशको सहयोग लिने अर्को देशको नलिने भन्दा त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो । यो त सैद्धान्तिक कुरा हुन्छ, परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको कुरा हुन्छ ।
दोस्रो कुरा– एउट खास विचार बोकेको देशको सहयोग लिनु हुन्छ र अर्को विचार बोक्ने देशको लिनुहुन्न भन्न थालियो भने कित्तावन्दीले शीतयुद्धको लहर फैलाउँदैछ, त्यसले देशलाई कस्तो असर गर्छ ? यो बुझ्नुपर्छ ।
तेस्रो कुरा–विकास नीति, बाह्य सहयोग नै नलिई गर्ने हाम्रो विकासको बाटो हो कि ? बाह्य सहयोग पनि लिएर हो भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक राजनीतिक प्रश्न जोडिन्छ । त्यसैले, आधारभुत कुराहरूमा परराष्ट्र नीति, लोकतन्त्रको ढाँचा, राज्यको चरित्र र विकासको बाटोबारे फरक–फरक विचार बोक्ने शक्ति एउटै गठबन्धनमा रहने त हुँदैन ।
हलो जोत्दा एउटा गोरु कुनापट्टि, अर्को छेउतिर भयो भने त खेत जोतिँदैन । त्यस्तो गरिनुहुँदैन । कि त स्पष्ट ढंगको विचार बनाएर लागौं, हुन्न भने हामी सौहार्दपूर्ण ढंगले हाम्रो विचार मिलेन भनेर अलगिआंै, त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा मैले राखेको हो ।
सत्ता गठबन्धनबाट एमसीसीका बारेमा विभिन्न विकल्प पनि आएका छन् । टेबल गर्ने, अलग्गिने, अमेरिकालाई पत्र लेखेर कुनै उपाय खोज्ने या चुनावपछि सार्ने आदि । तपाईंचाहिँ के भन्नुहुन्छ ? गठबन्धनले के गर्दा उपयुक्त होला ?
विकल्पबारे हामीले धेरै कुराहरू गर्दै आयांै । अब यो कुरा धेरै गिजोलेर राख्नुहुँदैन । नौनी पनि बढी मत्थ्यो भने पग्लिन्छ भन्छन् । त्यसैले उही कुरालाई पटक–पटक दोहोर्याएर राजनीतिक दलको, देशको लोकतन्त्रको, परराष्ट्र नीतिको कति विश्वसनीयता रहन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । कि त यो विषयमा हामीले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने हो भने हामी गम्भीर संकटमा फस्ने भएकाले कुनै निर्णयमा जानैपर्ने हुन्छ ।
यसमा सबभन्दा राम्रो त गठबन्धनमात्रै होइन, सहमतिमा नेकपा एमालेले पनि सकारात्मक भुमिका खेलोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । हुन त कतियप मान्छेले ओलीजीबारे टिप्पणी पनि गरे । मैले त मुद्दामा टिप्पणी गर्या न हो । व्यक्तिगत दुश्मनी होइन । हामी त लोकतन्त्रमा छौं, सबै दलले भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेकपा एमाले अहिलेको सबभन्दा ठूलो दल पनि हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा अडिग रहने भनेर उसले प्रतिवद्धता गर्दै पनि आएको छ । यस्तो अवस्थामा उसले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता भएकाले सहमतिले नै पास गरेर जानु सबभन्दा राम्रो हुन्छ पहिलो विकल्प ।
एमसीसीलाई पर सारेर लैजाउँ भन्ने विकल्पचाहिँ हराइसक्यो ?
हामीले पटक–पटक यो भन्दा विश्वसनीयता गुम्छ । बाह्य शक्तिहरूको पनि एउटा आफ्नो अहम् हुन्छ । उनीहरूले शंका के गरे भने यो नेपालको मात्रै निर्णय नभएर भूराजनीतिले पनि खेल्यो भन्ने शंका हुने भो । भारतसँग सहयोग लिँदा चीन र अमेरिकाले विरोध गर्दिने, चीनसँग लिँदा भारत र अमेरिकाले विरोध गर्ने, अमेरिकाको लिँदा चीन र भारतले विरोध गर्ने अनि नेपालले कुनै निर्णय नगर्ने भयो भने त भोलि डरलाग्दो द्वन्द्वमा फस्छौं र देश बर्बाद हुन्छ ।
अमेरिकासँग हामी आफैंले संवाद गरेर प्रोजेक्ट छनोट गरी टुंग्याएर हस्ताक्षर पनि गर्ने अनि अहिले गर्दिनँ भन्ने कुरामा हामी पनि अमेरिकाको ठाउँमा भए के ठान्थ्यौं ? त्यसकारण अब ढिलो गर्नुहुँदैन । तेस्रो बिकल्प छैन । तेस्रो विकल्पमा गयौं भने एउटा ठूलो दुर्घटना त नभनौं, ठुलो दुःख–कष्ट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसपा काँग्रेससँगको गठबन्धन तोड्ने पक्षमा छ कि छैन ?
तोड्नेभन्दा पनि मुद्दा मिल्नेसँग मिल्ने हो । अहिले हाम्रो मुद्दा मिलेको छ, त्यसकारण तोड्नुपर्ने कारण नै रहेन । मत नै मिलेन भने नमिल्नेसँग बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । अहिले हाम्रो विचार मिलेको छ । जसपा पनि लोकतान्त्रिक बैकल्पिक शक्तिका रुपमा आएको छ । बैचारिक ढंगले पनि हामी विकासको नीतिमा बाह्य र भित्री साधन स्रोतको परिचालन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । परराष्ट्र नीतिमा पनि भारत, चीन अमेरिका तीनवटै सँग सन्तुलन राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ भने गठबन्धनमा नरहने भन्ने प्रश्नै रहँदैन । हाम्रो र काँग्रेसको सहकार्य अझै दरिलो हुन सक्छ ।
तर, तपाईंहरूको पार्टीभित्रै पनि उपेन्द्र यादव एमसीसीबारे मौन हुनुहुन्छ । भोलि पार्टी दुई कित्तामा उभिने स्थिति आयो भने पहिलेजस्तै सांसदहरूलाई ह्वीप नलगाउने नीति लागु गर्नुहुन्छ एमसीसीका सन्दर्भमा ?
मलाई अहिले त्यस्तो लाग्दैन । किनभने, दुई–दुई पटक हामीले सँगै बसेर एउटै कुरा गरेका छौँ । बाहिर छासछुस भन्दा उपेन्द्रजीले फरक विचार राख्नुभयो रे भन्ने कुरा यहाँ आइरहेको छ । अब त्यस्तो रहेछ भने त पार्टीभित्रै हामी छलफल गराँैला । तर, त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । भएछ भने पनि पार्टीमा फरक मत हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर जाने विधि त खोज्न सकिन्छ ।
तपाईंहरूले पहिले पनि एउटा नजिर त बनाउनुभएको छ नि आफ्ना सांसदलाई ह्विप नलगाउने ?
त्यो त विशिष्ट अवस्थामा हो । त्यही नजिर हुनुपर्छ भन्ने छैन । विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन् । मलाई पहिलो विश्वास त पहिले हामी एक मत भएरै जान सक्छौँ भन्ने छ । कसैको फरक मत भएछ भने बेग्लै कुरा । तर, हाम्रो अत्यधिक मत एमसीसीको अनुमोदन गर्ने पक्षमा जसपा हुन्छ । त्यसमा म ढुक्क छु ।
अघि परम मित्र प्रचण्डका बारेमा टिप्पणी गर्दिनँ भन्नुभयो, तर अलिकति प्रश्न सोध्नैपर्ने हुन्छ । प्रचण्डजीले देउवासँग मिलेर अमेरिकालाई चिठी पनि लेख्नुभयो । उहाँकै नेतृत्वको नेकपा सरकारका पालामा यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । को मनमा एमसीसी ठिकै छ, सहयोग हो, लिनुपर्छ, भन्नेजस्तो देखिन्छ । तर पार्टीभित्रको एउटा रेडिकल टिमले उहाँलाई अगाडि बढ्न नदिएको हो कि ? हिजो प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीकै कारणले सकिनँ भन्नुभयो भन्ने सुनियो । प्रचण्ड किन अफ्ठ्यारोमा पर्नुभयो होला ? प्रचण्ड किन बाध्यतामा पर्नुभयो ? यस्तो अवस्थामा उहाँलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
हाम्रो परममित्रको स्वभाव नै त्यस्तो हो । उहाँको स्पष्ट धारणा कहिले पनि नबनाउने । कता गर्दा फाइदा हुन्छ, कता धेरै मान्छे छन्, त्यतैको पक्ष लिएर आफू पदमा बसिरहने उहाँको एउटा स्वाभाव हो । हिजो जनयुद्धमा हुँदाखेरि महत्वपूर्ण मोडहरूमा उहाँ बहकिएर गएको, कति उतार–चढाव भए भन्ने कुरा आइसके नि त । मैलेचाहिँ एउटा रिस्क लिएर बडा प्रताडित भएर दलाल गद्दारजस्ता अनेकखालका आरोपहरू सहेर नउभिएको भए त माओवादी जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा यहाँसम्म आउँदै आउँदैन थियो ।
मलाई अहिले चिन्ता कहाँ छ भने हिजो त हामीले केपी ओलीसँग संविधान नै जान्छ कि भन्ने चिन्ताले प्रतिगमन भनेर भनेकै हो । संविधान भत्कन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । अब त देशै भूराजनीतिको भुमरीमा पर्छ र देशको स्वाधीनता नै सङ्कटमा पर्छ कि भन्ने खतरा आयो । हिजोको प्रतिगमन थियो, महाप्रतिगमन हुने खतरा देखिरहेको छु म अहिले ।
म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, जुन सेक्टर काण्ड भन्ने दुर्घटनापूर्ण घटना भएको थियो, त्यस्तै सेक्टर काण्ड बनेर तुहिने खतरा छ । यस्तै अस्पष्ट, ढुलमुल चरित्रका कारणले गर्दा त्यस्ता गम्भीर मोडहरूमा स्पष्ट अडान नलिने र अप्ठ्यारोमा पार्ने काम उहाँले पहिले पनि गर्नु भएको हो । जस्तै– पहिलो कुरो त राजासँग मिल्ने कि अन्य दलहरूसँग मिल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न परेकै हो उहाँको र मेरो । मलाई उहाँ कारबाही गर्ने अवस्थामा जानुभएको हो ।
पछि ०६९ साल जेठ ३ गते जुन एउटा सहमति बन्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने भन्नेमा उहाँ दरोसँग उभिदिएको भए हुन्थ्यो । विरोध गर्ने त अरुले हो । तर, म चाहिँ गरेर जानु पर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ । त्यसबेला मलाई साथ दिनुभएको भए, त्यतिबेलै संविधान बन्थ्यो । त्यतिबेला ढुलमुल गरेर जेठ ३ गतेको सहमति टुट्दा संविधान नै बन्न सकेन ।
त्योभन्दा अझ अगाडि पालुङटार प्लेनम भन्ने भएको थियो, त्यसमा विद्रोह कि संविधानसभा भन्दा, विद्रोह हैन संविधानसभा भन्ने मेरो लाइन थियो । किरणजीहरूको विद्रोह भन्ने लाइन थियो । उहाँ (प्रचण्ड) चाहिँ बीचबीचमा बसिदिनुभयो । त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा ठूलो भ्रम सिर्जना भयो । अहिले, अस्ति उहाँहरूले महाधिवेशनमा आएर त्यो पालुङटार प्लेनम त गल्ती भएछ भन्नुभयो ।
अहिले एमसीसीको हकमा पनि उहाँ (प्रचण्ड) ढुलमुल गरिरहनुभएको छ । अस्ति मात्र अमेरिकालाई पत्र लेख्ने, पार्टीमा अर्को गर्नुभएको छ । उहाँले फेरि चौथोचोटि ठूलो ब्लन्डर गर्दै हुनुहुन्छ । मेरा मित्रको स्वाभावजन्य नै कमजोरी हो । त्यो उहाँले रियलाइज गर्नुपर्छ । गर्नुभएन भने उहाँको पार्टीले मात्र होइन, देशले पनि दुःख पाउनेछ ।
यस्तो अवस्थामा मेरा मित्रले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहुनेछ । हिजो राजासँग मिल्ने भन्ने गल्ती र पालुङटारमा विद्रोह, संविधानभित्र विद्रोह भन्ने गल्ती, जेठ ३ को संविधान बनाएर कार्यान्वयन गरेर जाने–नजाने भन्ने ठूलो गल्ती गरिसक्नु भएको छ । यो चौथो गल्ती नगर्नुहोस् । गर्नुभयो भने उहाँलाई मात्र होइन, देशकै निम्ति ठूलो सङ्कटको विषय बन्न सक्छ । त्यो दोषको भागिदारी उहाँ बन्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो उहाँलाई सुझाव छ ।
सत्ता गठबन्धनमै आवद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालसँग तपाईंको छलफल हुन्छ होला । उहाँ पनि एमसीसीमा प्रचण्डकै लाइनतिर जानुभएको जस्तो सङ्केत देखिन्छ नि ? तपाईंं के भन्नुहुन्छ ?
उहाँसँग अहिले कुरा गर्न र भेट्न खोजिरहेको छु । के कुरा आउँदो रहेछ बुझ्ने कोसिस गर्छु । पहिलो कुरा सहमति बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ, पार्टीभित्र केही साथीहरूको विरोध छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो अलि पहिले । पछिल्लोचाहिँ उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन । मेरो विश्वास उहाँ पनि अलिकति अनुभव भएकै व्यक्ति हो । यो जटिल राजनीतिलाई बुझेका कारणले सहमतिमा सायद उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । तैपनि उहाँसँग छिट्टै सम्पर्क गर्छु ।
आजकै गठबन्धन बैठकमा एमसीसीबारे ठोस निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ । एकीकृत समाजवादी एमसीसीकै पक्षमा आउँछ भन्नेमा तपाईंं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
मैले अहिलेसम्म पाएको सूचनाले आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास हो । तर, ठ्याक्कै तोकेर भन्न सक्दिनँ । पार्टीको आफ्नो निर्णयको कुरा हो ।
एमसीसीका सन्दर्भमा नेकपा एमालेले खेलेको भूमिकाका बारेमा चाहिँ तपाईंंको विश्लेषण के छ ?
आफ्नो दल र नेताहरूको चुनावी स्वार्थका निम्ति यसलाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त भएन । हुन त एमालेजस्तो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दलले सोचेर नै आफ्नो अडान बनाउन खोजेको होला । तर, मेरो सुझाव उहाँलाई– यस्तो विषय त राष्ट्रिय मुद्दा बनिसक्यो, देशको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा बनिसक्यो । यो व्यवस्थालाई रक्षा गर्ने नगर्ने भन्ने मुद्दा बनिसक्यो । यस्तो विषयमा एमालेजस्तो जिम्मेवार दलले गैरजिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुहुँदैन । उसले पनि यसलाई साथ देओस र एमसीसी पारित गरेर देशमा जुनखालको अन्योल छाइरहेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न मद्दत गरोस् भन्ने लाग्छ ।
ओलीले एमसीसीका पक्षमा नै मतदान गर्नुहुन्छ भन्नेमा तपाईंं आशावादी हुनुहुन्छ ?
म आशावादी छु । ओलीजीसँग हाम्रा कतिपय विचार मिल्दैनन्, त्यसले गर्दा हामी लड्छौँ । तर, उहाँको एउटा मन पर्ने कुरा, उहाँले आँटेपछि गर्नुहुन्छ, दोहोरो कुरा गर्नुहुन्न । आफूलाई लागेपछि हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न । त्यसैले यो विषयमा उहाँलाई लाग्यो भने आँटेर पक्षमा आउन पनि सक्नुहुन्छ । त्यसैले मेरो आशा छ केपीजीले ठीक अडान लिएर यसलाई पारित गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ ।
कथमकदाचित सहमति भएन छ भने पनि यसैलाई फेरि कित्ताबन्दी गरिरहनु जरुरी छैन । मिल्लेहरू मिल्ने, नमिल्नेहरू नमिल्नेतिर हुने । त्यसो हुनु पनि लोकतन्त्रमा स्वाभाविकै हुन्छ । सके सर्वसम्मति, नसके बहुमतले गर्ने हो । त्यसैले बहुमत जुटाएर भए पनि अगाडि जानुपर्छ । अरुले चाहिँ आफ्नो मत सुरक्षित गर्दै जानुपर्छ ।
ओलीको पुरानो भूमिका हेर्दा एमसीसी पारित गर्न जोड गर्नुभएकै हो नि ?
हो । उहाँकै पालामा यो प्रस्तुत भएको हो । यसलाई पारित गराउनका निम्ति नै भूमिका खेल्नुभएको हो र अहिले पनि गर्दाखेरि उहाँलाई राम्रै हुन्छ । उहाँको जुन सोच हो, त्यसलाई निरन्तरतामै हुन्छ । नगर्दा बरु उहाँको विश्वासनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । गर्दा उहाँको विश्वासनीयता बढ्छ ।
अलिकति राजनीतिक विश्लेषण गरौँ । एमसीसीकै विषयले गठबन्धनबाट माओवादी बाहिरियो र गठबन्धन भत्किने स्थिति आयो भने के हुन्छ ?
सकभर त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो चाहना हो । त्यस्तो नहुँदा नै राम्रो हुन्छ । राष्ट्रिय सहमति बनाएर जाऔँ भनेर मैले पोहोर साल पनि भनेँ । त्यस्तोबेलामा केपी ओलीलाई सबभन्दा आलोचना गर्ने मैले नै किन गएर भेटेें होला भनेर प्रश्न उठ्यो । त्यतिबेला पनि मैले गम्भीर सङ्कट जस्तो देखेपछि ल मिलौँ, राष्ट्रिय सहमति गरौँ, हामी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पदको आकाङ्क्षा नगरौँ र अलिकति नयाँ ढङ्गले अगाडि जाऔँ भनेकै हो पोहोर पनि । यस्तो भुमरीका बेला अहिले पनि काँग्रेस, एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी सबैले सहमति गरेर नै यसलाई पारित गरेर जानु सुनमा सुगन्ध हुन्छ । यही नै होस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
असहमति जनाएर सरकारबाट बाहिर जाँदा माओवादीको भविष्य कस्तो होला ? उनीहरूलाई एमसीसी विरोधीहरूको बल मिल्छ कि ? माओवादीलाई चुनावमा फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ ?
चुनावमा फाइदा–घाटा त उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ । मचाहिँ देश र जनतालाई नाफा–घाटा के हुन्छ, हेर्ने हो । देश र जनतालाई चाहिँ एमसीसी पारित गरेर फाइदा हुन्छ । भारत, चीन, अमेरिका तीनवटैसँग सहयोग लिएर देशलाई समृद्ध बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, तपाईं हाम्रा छोराछोरी विदेश पलायन जुन भइरहेका छन्, त्यसलाई रोकेर देशभित्रै राख्ने वातावरण बनाउन हितकर हुन्छ । त्यसलाई ध्यान दिएर निर्णय गर्नुपर्छ । तत्काल चुनावमा फाइदा बेफाइदा के हुन्छ भन्नु चाहिँ हुँदैन । जसले त्यो गर्छ, त्यो देशको हितमा हुँदैन । त्यसो गर्ने देश र जनताप्रति प्रतिवद्ध मान्छे होइन ।
पछिल्लो समय अमेरिकी अधिकारीहरूले नेताहरूलाई फोन गरेर धम्कीपूर्ण भाषा बोले । यो त अमेरिकाले हेप्ने रहेछ, इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै प्लान रहेछ भन्ने आशङ्काहरू त अमेरिकाको फोनले पनि अलिकति बढाइदियो कि ?
त्यो त सबैबाट आएको छ नि । भारतलाई हामीले बुझेकै छौँ । चीनलाई पनि बुझेकै छौँ । ठूला शक्तिहरूले त्यो गर्छन् । त्यस्तो भएको हुनाले त हामी समृद्ध र बलियो हुनुपर्यो, मेरो भनाइ त्यो हो । चुपचापसँग अहिले कसैसँग पनि जोरी नखोजीकन देश समृद्ध बनाऔँ । बलियो बनाऔँ । त्यसपछि आवश्यक पर्दाखेरि पौंठेजोरी खेलौँ भन्ने हो ।